Ezi zibhotshi zenzelwe i-Walkin 'nguNancy Sinatra - Okunye
Ezi zibhotshi zenzelwe i-Walkin 'nguNancy Sinatra
UNancy uyintombi kaFrank Sinatra. Uyaziwa kakhulu ngale ngoma, kodwa ukude nommangaliso omnye: ubhale amaxesha ali-10 kwi-US Top 40 ukusukela ngo-1966-1968, eneengoma ezithandathu, ii-duets ezintathu no-Lee Hazlewood kunye noyise- # 1 'Somethin' Isidenge. ' Kwakhona wabonakala kwiimuvi ezininzi, kubandakanya Isantya kunye noElvis Presley.
U-Nancy waye kwirekhodi efanayo njengoyise odumileyo, kodwa bebeza kumshiya ngenxa yokuba ii-singles zakhe zokuqala ezimbalwa zaphaphalaza. Izinto zatshintshile xa bamdibanisa nomvelisi uLee Hazlewood, owambhalela le nto kwaye wamhlisa ukuzisa. Inzame yokuqala yaba 'Kude Kakhulu Babe,' eyayibetha kancinci kwaye eyesibini yaba 'Ezi bhotshi zenzelwe i-Walkin'. ' UNancy wazisola ngengoma, esithi ngo-1971, 'Umfanekiso owenziwe' ziibhutsi 'ayingowam ngokwenyani. 'Iibhotshi' zazinzima kwaye ndithambile njengoko zisiza. '
Kodwa ke u-Lee wayezibhalele le ngoma: 'Yayiyingoma yeqela endandilibhale kwiminyaka emibini okanye emithathu ngaphambi koko. Yayihlekisa ukuqala. Ndaye ndambhalela ingoma emnandi, 'IsiXeko soze silale ebusuku,' kwaye wayezibuza ukuba angathengisa. Ndaphendula ndathi, 'Iphindwe kathathu kunale' Long Babe, 'kwaye yenze njalo ngama-60,000. Sakha ikhondo lakho lomsebenzi. ' Nditshintshe ingqondo yam ndayibeka emva ko 'Boots' kwaye ithengise i-6 yezigidi. '
U-Lee Hazlewood uthe ngale ngoma: 'Xa' iibhutsi 'yayingu # 1 kwisiqingatha samazwe emhlabeni, uNancy weza endlwini yam, kwaye wayelila. Uye wathi, 'Abakhange bakhethe ukhetho lwam eReprise kwaye bathi ndinetyala kubo ngeedola ezili-12,000.' Ndathi, 'Uyadlala, sinerekhodi enkulu emhlabeni.' Ndabiza igqwetha lam eNew York ndaza ndafowunela uNancy ngosuku olulandelayo ndathi, 'Ungathanda njani i-1 yezigidi zeedola? Ndineelebheli ezintathu ezinikezela zona okwangoku kwaye ndinokuzifumanela into entle nam. ' Uthethile notata wakhe wathi angabhala ikhontrakthi yakhe noReprise - ngapha koko wayethengisa ngaphezulu kunaye ngelo xesha. ' (Iingcaphuno ezivela I-1000 UK # 1 Ukubetha .)
UNancy Sinatra ukhumbule kolu xwebhu Abasebenzi bokuqhekeza ukuba uLee Hazlewood wayeza kuyirekhoda ngokwakhe le ngoma, kodwa wayethetha ngayo. Uthe uSinatra, 'Xa umntu eyicula, ingoma iyangqwabalala kwaye iyaphatha gadalala, kodwa ilungele intombazana encinci.'
UHazlewood wayenomsebenzi omde nokwahlukileyo njengombhali wengoma, umvelisi kunye nomdlali weqonga. Wenza uthotho lwee-duets kunye no-Nancy Sinatra embindini wee-60s apho wayehlala emdlalela ukuba adlale isini seengoma. U-Hazlewood usebenze no-Duane Eddy, kwaye bonwabele ukuvuseleleka kwiminyaka ye-90s xa isizukulwana esincinci sifumene iinzame zakhe zangaphambili.
UHazlewood wayehlala ekhuthaza iingoma zakhe kubantu abaqhelekileyo. Kwi IBlender Udliwanondlebe nemagazini, wathi wayekwi-bar yaseTexas xa abanye abathengi baqala ukuhlekisa umntu omdala malunga nentombi yakhe encinci kunye nendlela ayilawula ngayo. Indoda yaphendula ngokubeka iinyawo zayo kwisitulo esithi, 'Ndiyayazi into ocinga ukuba inokuba yiyo umphathi. Kodwa ndingumphathi wendlu yam, kwaye ezi zihlangu ziya kumhamba yonke le mini ndingayiyo. '
Thetha malunga 'nokuhamba' kwebhasi-yokuhamba nomfanekiso weebhutsi ezihamba yonke indoda, u-Chuck Berghofer waziswa ukudlala i-string bass (uCarol Kaye wadlala umbane). UHazelwood wamenza ukuba adlale amanqaku amafutshane okushenxisa ukuze afumane isandi.
Enkosi kwinkampani ekuthiwa yi-Colour-Sonics, ividiyo eyenziwe ngefashoni yenziwa ukuba le ngoma ibonise uNancy neqela labadlali abadlala le ngoma ngeebhutsi, iijezi nokunye nje okuncinci. Umbala-Sonics wenze iividiyo zebhokisi yeejukhi zebhari; unokuvula iikota ezimbalwa kumatshini kwaye ifilimu iya kudlala. Ukwazi abaphulaphuli babo, bayalela ividiyo 'yeebhutsi', eyayikhokelwa nguRobert Sidney, umdanisi owayesebenza kumdlalo bhanyabhanya Apho Amakhwenkwe Aphi kwaye Intili yeDoli .
Umbala-Sonics wawungekho malunga nexesha elide, kodwa ividiyo ibonisiwe kwinani lamaxwebhu kunye nolunye ulonwabo okanye iinkqubo zeendaba. Ividiyo yenze indlela yayo kwiYouTube ngo-2010, apho yafumana khona ngaphezulu kwe-100 yezigidi zokujonga.
Kwimuvi yowe-1987 IJacket epheleleyo yentsimbi , le yayisetyenziselwa kwimeko apho ihenyukazi licela ishishini eVietnam. Enye imbonakalo bhanyabhanya eyaziwayo yengoma yayikwifilimu ka-1994 Silungele ukunxiba . Le nguqulo yaculwa nguSam Phillips, owayehlala eyithanda kakhulu ingoma. Usixelele ukuba ngenye imini angathanda ukuthatha ingoma eyahlukileyo, njengoko evakalelwa kukuba inguqulelo ecacileyo- iSinatra- sele yenziwe.
IMegadeth yenze isiciko soku Ukubulala lishishini lam ... kwaye ishishini lilungile . Uhlelo lwantlandlolo lwaluquka uhlobo olungafakwanga luphicothwe, kodwa uxinzelelo olulandelayo lubandakanya uhlolo, olunegazi kakhulu, ngenxa yokwala kombhali u-Lee Hazlewood ukunika iqela amalungelo okuphinda akhulule ingxelo kunye namazwi ayo aguqulweyo.
IKyle - iMontreal, Canada
UJessica Simpson noWillie Nelson benza le ngoma kwingoma yesandi somdlalo bhanyabhanya ka-2005 Iinkokheli zeHazard . Inguqulelo yabo yaveliswa nguJimmy Jam kunye noTerry Lewis ngamanye amazwi abhaliweyo abhalwe nguSimpson. UNelson wadlala uMalume uJessie kwimovie kwaye uSimpson wadlala uDaisy Duke. Kwividiyo, uqhushululu luqhambuka kwiNdlwane ye-Boar kodwa iyajika ibe yindawo yokuntywila xa iqela lamantombazana lingena linxibe ibhulukhwe emfutshane. Inguqulelo yabo yayisetyenziswa kwiphulo lentengiso yeTV yePizza Hut eneenkwenkwezi kuSimpson.
I-Fixx irekhode oku kwi-albhamu ka-2002 Xa iihagu zibhabha: Iingoma ongazange Ucinge ukuba uya kuva . UCevin Soling, owayengumvelisi ophetheyo wecwecwe, ucacisa indlela le nto yahlangana ngayo: 'Indlela endiqale ngayo ukuyazi loo ngoma yayiyikhava emangalisa kakhulu endingacingi ukuba ikhe yakhutshwa. Bendihlala ndimamele umboniso kaGqirha Demento, kwaye kukho eli qela, uBarnes noBarnes, ababedume ngokwenza ingoma ethi 'iintloko zentlanzi.' Benze le inshorensi 'Ezi bhutsi zenzelwe i-Walkin', 'kuphela bakubiza ngokuba' Ezi zintsha zenzelwe ukukhasa. ' Ndandimncinci, kodwa ke yindlela endandiyifunda ngayo ingoma. Ewe, yayiyingoma enkulu, kwaye isimbozo separody engaqhelekanga yayiluhlobo loxanduva kuloo nto.
(I-Fixx) ithathe ixesha elide kuloo mzila, kuba bebehamba besiya ngapha nangapha, kuba ngenene babenomdla wokugqibelela malunga nezinto, kwaye bebengazukukwenza nje into xa bengacingi ukuba banako yenze kakuhle. Benza, ndicinga, iinzame ezintathu ngaphambi kokuba ekugqibeleni bonwabe. Kodwa bayithathe ngokungathanga ngqo. '
Ngo-1996, uNancy Sinatra wanikela ngeebhutsi ezimhlophe ezimhlophe awayezinxibile ukukhuthaza le ngoma kwiHard Rock Cafe eBeverly Hills.
UStan Cornyn, isigqeba somculo kunye nomlobi obhiyozelwayo wenqaku le-liner, wenza umbongo ngoNancy Sinatra kumanqaku ale ngoma:
'Ndiza kuyicula njani le nto?'
'Njengentombazana eneminyaka eli-16 ubudala ebithandana nendoda eneminyaka engama-40, kodwa kuphelile ngoku.'
Ubonakala emhle, unxiba kakuhle, uphila kamnandi, uyatya, uyasela, uyathanda, uyaphefumla, uyangqungqa, uyacula, ukhala kamnandi. Iinyawo ezintlanu-ezintathu kunye namehlo engwe. Umlomo owenzelwe iilollipops okanye ukwanga, ukubamba okanye ukuncuma. Amashumi alithoba anesihlanu eeponti zothando. Ebesele ekhona. Ngokuqhelekileyo kunamashumi amabini, ubonakala emncinci. Oko kujongeka, njengoLolita Humbert, njengoDaisy Clover. Amandla okuphakamisa, okanye ukutshabalalisa, efuna kuphela eyangaphambili, kodwa engoyiki ukubhengeza le yokugqibela ukuba ixesha lifikile. Amehlo abona ngamehlo, azi ngakumbi, ajonge ixesha elide. Ungoyiki ukutsala ngeebhutsi kwakhona, ulahle into etshisiweyo ngento engaqhelekanga 'Mde, babe,' kwaye ufumane.
Into encinci, ethe-ethe, ephilayo, iyodwa kwilizwe elimangalisayo-elikhohlakeleyo-elichithwe-elasendle-elinexhala-le-wisedup-warmbodied world. Ngokwakhe. Ukufumana i-crepes yakhe yemihla ngemihla kunye neeCoke ngokucula iinyani zothando. Ilizwi lakhe lixela iingoma zakhe. Akukho buqaqawuli bubuxoki, ilizwi lakhe linje: ukudinwa kancinci, ukubeka kancinci, ukuthanda kakhulu. Akukho mntu uzalwa ephucukile. Yindawo ekufuneka urhubuluze kuyo, ukhasele kwilizwe elinefula, ngaphezulu kweekhilomitha zepavumente engagalelwanga, iNgxaki edlulileyo, iikona ezidlulileyo kunye neefolokhwe ezingenazimpawu zeklabhu yemoto ukukukhomba, de ufike apho kwaye uvuke ulumke.
Ufikile. Uyakuculela malunga nokukhasa okude. Kwaye kukwenza ukuba umamele. '
U-Eileen Goldsen urekhode iinguqulelo zesiFrentshi, isiTaliyane kunye nesiJamani ngo-1966. Inguqulelo yesiJamani ('Die Stiefel sind zum wandern') yabalaseliswa ngo-2013. Inkedama emnyama isiqendu 'Ithuku.'
Ukutolikwa kwekinky kujongwa ukuba unxibe i-miniskirt enxibe uNancy Sinatra esenza zombini uyolo kunye nentlungu ngeebhutsi zakhe zokuhamba, kodwa uNancy uqinisekisa IBoston Globe ukuba wayengaqapheli ngeyiphi na i-S & M:
Oku kwagutyungelwa yimvumi yelizwe uBilly Ray Cyrus kwi-albhamu efanayo 'Achy Breaky Heart' enesihloko Abanye banike konke . Amanye amagcisa agubungela le ngoma afaka uLaToya Jackson kunye noCrispin Hellion Glover.
Iine ezincinci iMaya Rudolphs ziyicula le kwi Intengiso yeKarlna ebaleka ngexesha le-2021 Super Bowl. Umbono: Bafuna ukuthenga izihlangu kunye nokwahlulahlula iintlawulo.
Ngubani obhale ingoma ethi "sililizwe" noMichael jackson?
kodwa ekugqibeleni ayinamsebenzi neengoma
lyrics umtyholi wehla waya eGeorgia